प्रदेश ३ सरकार : एक वर्षमा ३ अर्ब ५० करोड सडक पूर्वाधारमा खर्च – Chitwan Post
प्रदेश ३ सरकार : एक वर्षमा ३ अर्ब ५० करोड सडक पूर्वाधारमा खर्च
हेटौँडा । प्रदेश ३ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५० करोड सडक पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले सडक पूर्वाधारका लागि आएको बजेट ५७ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
निर्देशनालयअन्तर्गत रहने ६ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय र दुईवटा डिभिजन कार्यालयबाट कुल बजेट ६ अर्ब ५० करोडको ५७ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५० करोड खर्च गरेको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. सहदेवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।
सडक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत प्रदेश ३ का विभिन्न जिल्लामा गरी कच्ची सडक ४ सय १८ दसमलब ९९ किलोमिटर निर्माण भएको छ । यस्तै, ग्राभेल सडक १ सय ६० किमी भएको छ भने कालोपत्रे सडक ९० किलोमिटर, ढलान सडक ४ किमी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, ३ नम्बर प्रदेशभित्र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १४ वटा सडक पुल बनेको छ, जसमा ललितपुरमा दुईवटा, काभ्रेपलाञ्चोकमा तीनवटा, सिन्धुपाल्चोकमा चारवटा रामेछापमा दुईवटा, नुवाकोटमा तीनवटा पुल बनेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यस्तै, सडक पूर्वाधारअन्तर्गत नै पक्की नाला ललितपुरमा ४ दसमलब ४ किलोमिटर बनेको छ । टेवा पर्खाल पनि ललितपुरमा ९ किलोमिटर बनेको छ । ललितपुरमा नै ट्रस ब्रिज निर्माण एउटा, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन दुईवटा र ढलको कार्य ३ किलोमिटर भएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. भण्डारीले बताएका छन् । भण्डारीका अनुसार सडक पुल सर्वे २२ वटा भएको छ भने २ सय १० किलोमिटर सडक सर्वे गत आर्थिक वर्षमा भएको छ ।
निर्देशनालयअन्तर्गत रहने ६ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु रहेका छन् । ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा पूर्वाधार विकास कार्यालय रहेका छन् । यस्तै, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोट र खुर्कोटमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय खुर्कोटबाहेक अन्य सबैले बुझाइसकेका छन् ।
९ वटा झोलुङ्गे पुलका लागि १० करोड
प्रदेश ३ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको झोलुङ्गे पुल यसवर्ष ९ वटा बन्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयबाट उक्त झोलुङ्गे पुल बन्ने भएको छ ।
९ वटा झोलुङ्गे पुलका लागि सरकारले २० करोड बजेट विनियोजन गरेको निमित्त निर्देशक डा. भण्डारीले बताए । यस्तै, प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बन्नुपर्ने ७० वटा सडक पुलमध्ये १४ वटामात्रै बनेपछि बाँकी यसवर्षका लागि सरेको छ भने थप ४० वटा सडक पुल निर्माण गर्ने भएको छ ।
योजना आयो, बजेट आएन
देश संघीयतामा गएपछि संघका धेरै कार्यालयहरु प्रदेशमा समाहित भए । कार्यालयसँगै विकास योजनाहरु पनि हस्तान्तरण भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सडक पूर्वाधारसम्बन्धी योजना हस्तान्तरण गरे पनि बजेट भने आउन सकेको छैन ।
यो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि संघीय सरकारले ६९ वटा सडकको योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यो । तर, उक्त योजना सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने २ अर्ब ५७ करोड बजेट भने सरकारबाट हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको योजनामा केही निर्माणधीन योजनाहरु पनि रहेको निमित्त निर्देशक डा. भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री पौडेलले नै सम्हालेका छन् ।